Endri-javatra ny fantsom-by vy
A: Ny fantsom-by dia manakana ny fiparitahan'ny afo tsara lavitra noho ny fantsom-by satria tsy mora may ny vy. Tsy hanohana afo na ho may izy io, ary hamela lavaka hamelezan'ny setroka sy ny afo amin'ny trano iray. Etsy ankilany, ny fantsona mora mirehitra toy ny PVC sy ABS, dia mety ho may avokoa, ny fandrehitra avy amin'ny fantsona mora mirehitra dia miasa mafy, ary lafo ny fitaovana, fa ny fijanonana amin'ny fantsom-by vy, fantsona tsy azo may, dia mora apetraka ihany ary tsy lafo.
B: Ny iray amin'ireo toetra mampiaiky indrindra ny fantsom-by dia ny faharetany. Satria ny fantsom-plastika dia napetraka be dia be hatramin'ny niandohan'ny taona 1970, mbola tsy voafaritra ny ainy fanompoana. Na izany aza, nampiasaina ny fantsom-by vy nanomboka ny taona 1500 tany Eropa. Raha ny zava-misy, ny fantsom-by dia namatsy ny loharanon'ny Versailles any Frantsa nandritra ny 300 taona.
C: na ny fantsom-by vy na ny fantsom-plastika dia mety marefo amin'ny fitaovana manimba. Ny fantsom-by dia mety iharan'ny harafesina raha ny haavon'ny pH ao anaty fantsona dia milatsaka ambanin'ny 4.3 mandritra ny fotoana maharitra, saingy tsy misy distrika fanadiovana ara-pidiovana any Amerika mamela ny zavatra rehetra misy PH ambanin'ny 5 tokony hatsipy ao anaty rafitra fanangonana tatatra. Ny 5% amin'ireo tany any Amerika ihany no mampikatso handatsaka vy, ary rehefa apetraka amin'ireo tany ireo dia azo arovana mora sy tsy lafo ny fantsom-by. Etsy ankilany, ny fantsom-plastika dia mora tohina amin'ny asidra sy solvents maro ary mety ho simban'ny solika. Ho fanampin'izany, ny ranoka mafana mihoatra ny 160 degre dia mety hanimba ny rafitra fantsom-pitrandrahana PVC na ABS, saingy tsy miteraka olana amin'ny fantsom-by.